Sicir bararkii bishii abriil oo ka sareeyay bilihii kale - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sicir bararkii bishii abriil oo ka sareeyay bilihii kale
La cusbooneeyay torsdag 11 maj 2017 kl 13.29
La daabacay torsdag 11 maj 2017 kl 12.05
Sicir-barar: isku celcelinta is-bedelka qiimaha macaamiisha ee 12 bilood
lacag isugu jirta waraaqo iyo qadaadiic oo meel saaran. sawir: Ruud, Vidar
Sicir bararka ayaa bishii abriil kor u gaaray 1,9% kolka loo barbar-dhigo bishii ka horreeysay ee maarso oo uu gaarsiisnaa 1,3%. Intii lagu guda jirey bilihii maarso iyo abriil ayuu kor u kacey adeeggii macaamiisha 0,6%, sida ay sheegtay xarunta dhexe dawliga ee tirakoobka oo magaceeda loo soo gaabiyo SCB.
– Waxaa la heley sicir-barar aan la fileyn oo loo riyaaqay. Iyada oo qarka loo saaran yahay goolkii bangiga qaranku uu hiigsanaayey ee ahaa sicir-barar gaarsii-san 2%. Iminkana ku sugan – 1,9 boqolkiiba, waana heer aannu gaarin muddo shan sannadood ah. Midda kor u qaaday sicir bararka ayaa lagu macneeyey qiimaha tigidhada dayuurradaha dibadda oo kor u kacay, sida uu sheegay Johan Prane, oo ka howl-gala laanta dhaqaalaha ee Ekot.
Maxay dhacdadani uga dhigan tahay bangiga qaranka?
– Farxad iyo raynrayn ayuu ku jiraa hoggaanka bangiga qaranku. Bishii ka horreeysay ayuu hoos u dhacay sicir bararku, waana midda hoggaanka bangiga qaranka ku khasabtay inuu qaado tallaabooyin uu ku dhiiri-gelinaayo dhaqaalaha sidii kor loogu qaadi lahaa sicir-bararka si loo gaaro goolkii la hiigsanayey.
Qiimaha kor u kacay ee tigidhada dayuurradaha, buugagta, adeegyada bangiyada, dharka iyo kabaha ayaa ka mid ah dhacdooyinka kor u qaadey sicir-bararka, halka qiimaha hoos u dhacay ee korontadu uu hoos u dhigay.
Sicir-bararku waa saamiga isku celcelinta is-bedelka qiimaha macaamiisha ee 12-kii bilood ee ugu dambeeyey.